Genital Herpes လိင်လမ်း ရေယုံ | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံဆိုတာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်စေတဲ့ရောဂါတွေ အများကြီးထဲမှာ ပါတယ်။ ယောက်ျား-မိန်းမ လိင်အင်္ဂါတွေ အနီးအနား အရေပြားနဲ့ (မြူးကပ်စ်) အမြှေးပါးတွေမှာ လာဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ၂ မျိုး ရှိတယ်။
• ရှားတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ တက်စေ့ရောင်တာ၊ ဆီးအောင့်တာ၊ မွေးလမ်းက တခုခုဆင်းတာ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုရင် စောစော ဆေးကုထားရင် ကောင်းတယ်။ ကလေးဖွါးချိန် စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ မွေးလမ်းမှာ ရေယုံပေါက်နေသူကို ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ကောင်းတယ်။ ကလေးကို ကူးစက်ရင် ဆိုးတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ Encephalitis ဦးနှောက်ရောင်၊ Chronic skin infection နာတာရှည် အရေပြားနာ၊ Severe developmental delays ဖွံ့ထွားမှု နှေးလွန်းတာ နဲ့ Death အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Acyclovir (Zovirax) ဆေးက Capsules 200 mg, Tablets 400 and 800 mg, Suspension 200 mg/5 ml, Injection 50 mg/ml, Powder for injection 500 and 1000 mg နဲ့ Ointment 5% လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ လူကြီး 200-800 mg ကို ၄ နာရီတခါ သောက်ရတယ်။ သွေးကြောထဲ ထိုးရင် 5-10 mg/kg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်ထိုးရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေအတွက် သုတေသန လုပ်တာ မပြည့်စုံသေးပါ။
2. Famciclovir (Famvir) ဆေးက Tablets 125, 250, 500 mg လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်ပါ။ လူကြီး တခါသောက် 1,000 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပြန်ဖြစ်သူဆိုရင် တနေ့ 1,500 mg တခါထဲသောက်ပါ။ နောက်ပြီး တခါသောက် 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၁ နှစ်အထိ သောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေ အတွက် သုတေသန မပြည့်စုံသေးပါ။
3. Valacyclovir (Valtrex) ဆေးက Caplets 500 mg လာတယ်။ အစာနဲ့ နီးနီးဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။ လူကြီး စဖြစ်စသိရင် တခါသောက် 1 gm တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက် သောက်ပါ။ အနာဖြစ်မှဆိုရင် 1 gm တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက် သောက်ပါ။ ပြန်ဖြစ်သူဆိုရင် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက် သောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေ အတွက် သုတေသနလုပ်တာ မပြည့်စုံသေးပါ။
Home care အိမ်မှာတင်လုပ်သင့်တာတွေရှိတယ်။
• သိပ်တိကျချင်ရင် ရေယုံမရှိတာ သေခြာသူနဲ့သာ ပေါင်းဖက်သင့်၊ အိမ်ထောင်ပြုသင့်တယ်။
• Condoms (ကွန်ဒွမ်) သုံးတာဟာ ရှိသမျှနည်းတွေထဲမှာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တယ်။
• Vaccines ကာကွယ်ဆေးတွေက စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွေမှာသာ ရှိပါသေးတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၂၅% ကနေ Aseptic meningitis ဦးနှောက်မြှေး ရောင်တယ်။ ဆီး မသွားနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။
Previous PostBody odor ကိုယ်နံ့Next Postညနေစာ အိမ်လုပ် မြီးရှည်လေးပါ